Geeridii nabigeena Muxammed Salawaatullaahi Wasalaamuhu Calayhi
March 19, 2012 | Posted by admin
Nebigeenii suubanaa Salawaatullaahi Wasalaamuhu Calayhi wuxuu jiranaa 18 maalmood oo ay Asxaabtu booqanayeen Xanuunkiisa, Xanuunkii ugu horreeyay wuxuu ahaa Madax-xanuun, habeenkii isniinta ee uu maalinkeeda dhiman doono ayaa xanuunkiisii cuslaaday.
Sayid-Bilaal ayaa aadaamay aadaankii salaadda subax wuxuu istaagay albaabka guriga Nebiga, wuxuuna yiri: (Assalamu caleyka yaa rasuululaahi), Faaduma ayaa tiri: “Rasuulkii Illahey nafsadiisa ayuu ku mashquulsan yahay, markii salaaddii cadaatay ayaa Sayid-Bilaal soo laabtay, wuuna salaamay rasuulka sidii hore oo kale, dhawaaqii Bilaal waxaa maqlay rasuulka wuxuuna yiri: “soo gal Bilaal”, waana soo galay Bilaal isagoo ooyaya Rasuulkuna SCW wuxuu yiri: Bilaalow jiradii ayaa igu cuslaatay ee ha tujiyo salaadda dadka Abuubakar Sadiiq.
Bilaal waa baxay isagoo madaxa gacmaha saaranaya, dhahayana musiibo ayaa noo timid iyo ereyo kale oo la mid ah. Masjidkii ayuu galay, wuxuuna Abuubakar ku yiri “Nebigu wuxuu ku amrayaa inaad salaadda tujiso”Abuubakar markii uu arkay mixraabkii uu Nebigu NNKH istaagi jiray oo faaruq ah wuu hanan waayay nafsaddiisa waana la miir daboolay waana qeyliyay, muslimiintii oo dhanna wey qeyliyeen, qeyladii ayuu maqlay Nebigu NNKH wuxuuna weydiiyay gabadhiisa Faadumo wuxuuna yiri “ Faadumoy waa maxay hugunka iyo sawaxanka yeeraya?” waxay tiri Faadumo ”Muslimiintii ayaa qeylinaya markey ku waayeen”.
Intaa kaddib Nebiga NNKH waxaa la geeyey gurigiisa, Illahay ayaa u waxyooday Malakul-mowt wuxuuna yiri: ”Hoobo (u tag) xabiibkayga (kaan jeclaa) Muxammad NNKH uguna tag suurad wanaagsan una dhimri (naxariiso) marka aad ka qaadaysid nafta, markii aad u tagtid idan weydii, haddii uu kuu idmo u gal guriga balse haddii uu kuu diido ha u galin, kana soo laabo”.
Malakul-mowt wuxuu u tagay Nabigeena Muxammad NNKH isagooo u eg nin reer baadiye ah, wuxuuna yiri: ”Assalamu calaykum ma soo galaa?” Faadumo ayaa la hadashay oo tiri: “Ninyahow rasuulkii Illahay wuxuu ku mashquulsan yahay nafsadiisa”!!
Rasuulku wuxuu yiri: “malakul-mowdow ii soo dhowow”. Malakul-mowt waa u soo dhawaaday naftii ayuuna ka jiiday illaa ruuxdii ka soo gaarto xudunta.Rasuulku wuxuu yiri: “maxaa darnaan badiyey xaraaradda (xanuunka) mowdka”, wuxuu kaloo yiri: “malakul-jibriilow ma waxaad dhibsatay fiirinta wijigayga?”. Malakul-jibriil wuxuu yiri ” Illaahay xabiibkiisiyow yaa awood u leh inuu fiiriyo wajigaaga adigoo sakaraadaya”. Aanas Binu Maalik wuxuu yiri: ” Nabigu markay naftu ka baxaysay wuxuu lahaa:Waxaan idiin dardaarmayaa salaadda iyo wixii ay hanatay (milkisay) gacmihiinu.
« Video Xogwaran: Dooda Banadir Yaa Iskaleh?
Soonka iyo sideeda qodob ee buriya »